Mmetụta ihe omuma ụzọ dị mfe iji mee ka ọtụtụ nde ndị na-eso ụzọ Twitter
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ na Twitter, ị ruru ebe kwesịrị ekwesị. N'ebe a, Artem Abgarian, Onye Ọrụ Nlekọta Ndị Na - ahụ Maka Ọrụ nke Semalt , ga - agwa gị ụfọdụ ụzọ dị egwu iji nwetakwuo ndị Twitter.
Ngwá Ọrụ nke Na-eme Ka Egwuregwu Na-agbagha
Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ ga-amata gị site na ndụ gị na foto profaịlụ gị. Ọ bụ ya mere ị ga-eji rụọ ọrụ na-adọrọ adọrọ ma na-adọrọ adọrọ iji dọta ọtụtụ ndị ọzọ na ntanetị Twitter gị. Edee akwụkwọ akụkọ gị kwesịrị ịgwa ụwa ihe niile dị mkpa gbasara àgwà gị, ezinụlọ gị na ndị ọkachamara. N'ebe a, ị ga-ede ihe odide 160 ma kọwaa onwe gị. Jiri otutu oghere ma kpuchie isi ihe nile nke ndụ gị iji gbaa ndị mmadụ ume iso gị - data backup definition in Portland.
Bulite ezigbo foto nke Onwe Gị
Ọ gaghị abụ ihe ọjọọ ikwu na n'ihi akụkọ ọhụrụ ọ gaghị ekwe omume ịkwalite foto ndị dị adị n'ezie. Mana ọ bụrụ na akaụntụ gị dịka ọnwa isii, ị ga-ebugo foto gị ma kwe ka ụwa mara banyere àgwà na anya gị. Ndị mmadụ na Twitter na-adọrọ mmasị na profaịlụ nke nwere foto, n'ihi ya, ị gatụtụghị ebute ụdị onwe gị ma ọ bụ na-agwụ ike n'ihi na ọ nwere ike ibibi aha gị.
Na-azaghachi Tweets n'ihu ọha
Ekwesighi ka ihere mee ka gi na ndi mmadu kwue ihe di mkpa n'uwa. azaghachi tweets n'ihu ọha, ị nwere ike ghara inwe ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ma ghara ime ka saịtị gị nwekwuo ntụkwasị obi n'ịntanetị. Ọ dị mkpa ka ị gbanwee ntọala gị na akaụntụ Twitter ma mee mkparịta ụka ọha na eze. N'otu oge ahụ, ị ​​gaghị eji okwu ọnụ ma ọ bụ okwu nzuzu mgbe ị na - ekwurịta ihe dị mkpa na ndị na - eso ụzọ gị Ka ụwa hụ ihe ị na - eche ma ọ bụ kwuo dị ka tweet.
Soro ndị ọkachamara na dị ka akwụkwọ dị iche iche
I kwesịrị ịtụle ndị ọkachamara na-esonụ na Twitter ma dị ka ibe ndị a ma ama. Kpido ndị ọzọ amara karịsịa na posts gị iji mụbaa ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ gị. Site na isoro ndị ezi omume, ị nwere ike ijide n'aka na ịchọtara na netwọk ma nwee ike ịmalite mkparịta ụka iji mee ka ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ gị dị na Twitter.
Ọ dịghị ihe ọ bụla ị ga - echegbu ma ọ bụrụ na ụfọdụ ndị na - emechi gị ma ị nwere ike ịba ụba nke ndị na - eso ụzọ site na ịkekọrịta ọdịnaya na ịkọwa ihe ọma na Twitter.
Inyere Ndị Mmadụ Aka Ịntanetị
Ikwesiri inyere ndi mmadu aka na Twitter ka iwelie onu ogugu ndi mmadu. Soro ndị ọzọ na-eme ihe kachasị mma iji dozie nsogbu ha; tinye ihe niile na-eme mkparịta ụka ma mee ego na mgbasa ozi mmadụ na-eji saịtị na mgbasa ozi gị. Mgbe ị na - arụ ọrụ n'ịntanetị, ọ bụrụ na ịchọta na onye chọrọ enyemaka gị, ị kwesịrị ịdị njikere inyere ha aka.
Ikpeazụ mana ọ bụghị nke kachasị nta, ị kwesịrị ugboro ugboro tweet ka ndị mmadụ wee dọta mmasị na akaụntụ Twitter gị. Kwuo oke ọdịnaya na ihe ọmụma na-enye ihe ọmụma kwa ụbọchị dịka ọ bụ naanị ụzọ isi nweta ọtụtụ ụmụazụ na Twitter n'ime ụbọchị ole na ole. Ọ dịghị mkpa ka ị nweta ndị na-eso ụzọ na-esoteghị na ha agaghị enweta ezigbo nduzi ma ọ bụ azụmahịa ọbụla.